Uma ngaphambi nesisekeli, njengabo uthayi kwakubhekwa njengendlela abesifazane luyingxenye wesilisa, kodwa manje angakwazi ukukhokhela futhi. Yiqiniso, indlela abobulili fair, uthembela ezahlukene kancane, kodwa empeleni yayo kanye nesitayela ukugqoka noma kunjalo asishintshi. Ngakho, ngaphambi kokuba athikili imayelana nendlela ukugqoka zabesifazane uthayi. Indlela tie ke, sizokutshela ngokuningiliziwe.
Izinhlobo izibopho kwabesifazane
The fair ubulili anhlobonhlobo izesekeli idatha etholakalayo. Wide futhi ayibanzi, mncane futhi obukhulu, ithafa futhi nge umhlobiso egqamile, eside futhi ejwayelekile - lokhu kungaba uthayi zesifazane. Indlela uyibophe oyingqayizivele kuwe akekho oyothi. Nakuba i-amadoda, kukhona ezimbalwa kuphela inhlanganisela isizinda, futhi akudingeki ngaphezulu. Kodwa abesifazane yanoma isiphi isesekeli ikhabethe yabo - kuba ithuba lokuveza nemicabango yabo futhi baveze indlela innovative classical, ezibonakala izifundo.
Abesifazane tie. Indlela tie ngendlela classical?
Okokuqala, ukuthi uthayi - lokhu akulona Ngaphezu ibhizinisi isitayela njalo. Abesifazane, futhi amanye amadoda, ukugqoka ngisho ne evamile izikibha. Ngokuvamile ungahlangana abesifazane kuma-nightclub, okuyinto bazothola uthayi lapho, kubonakala wena, akusiyo ngempela ezifanele, kodwa kubonakala ewusizo kakhulu. Izinketho egqoke izophinda ziyahlukahluka.
Ngakho, ifindo ezingasoze zabuna isibopho zesifazane. Indlela tie? Thatha uthayi nge semikhawulweni ububanzi futhi ayibanzi. Thina uwubeke entanyeni, ukuze ezivuzayo zazingabonakali, elibheke emzimbeni. Ukuphela ububanzi kufanele kube esimfushane kuka emincane. Kumele ukusakaza wembatha maphakathi nesifuba. Ngaphezu kwalokho, ekupheleni ububanzi ijikeleziswa ukuze umphetho ubonakala, futhi Criss-waliwela nomunye ingxenye. Ngenxa yalokho, kufanele kube phezu ewumngcingo, kubalulekile ukuba usichithe kuyo. Ngaphezu kwalokho, ekupheleni ebanzi engeyokuqala yokweqa, bese ngaphansi iluphu entanyeni. Ibambezelekile, futhi uqedile! Isimo kubalulekile egqoke le uthayi kuyoba ukusondela collar. Amabanga akufanele kube phakathi kwabo, noma ukuthi akuphi eduze. Noma yimuphi nezinye izindlela nothayi akusho ifindo Friend, ngaphandle ngenhla.
Indlela tie uthayi insikazi? izindlela
Ngosizo iziqhano zokuhloba futhi ungakwazi belondekile uthayi. Isiqeshana kungaba ngokuphelele noma iyiphi isitayela, inqobo nje uma esifanelana isithombe sakho jikelele. Kungenzeka futhi tie uthayi impi njalo, kodwa musa qinisa nakho uvalwe, ngaphandle kwalokho ingozi akufanele umchilo kuye kamuva, futhi azungeze ifindo kubukeka umbukwane okuningi. Uma ungakwazi ukuthola ngendlela ethandwa nguye le-accessory ye "abesifazane" okukhethekile ezitolo, ungakwazi kalula ukuthola ukulingana emzini wale ndoda. Ngaphandle, zinzima ukuhlukanisa. Tie ungawusebenzisa nje yayiboshwa izungeze intamo, futhi uyobheka stylish nenhle. Ungesabi izame ongakhetha egqoke, futhi kalula zisebenzisa ngisho imibono kwakwakhiwa kakhulu, kulapho ukuze impendulo efanele umbuzo "nendlela tie Abesifazane uthayi" alikho nhlobo, ngoba kubalulekile ngoba abesifazane ukwenza kube kwasekuqaleni wayemuhle.
Louis Vuitton scarves - ifeshini stylish
Ingozi kashukela isebenza kubo bonke
Isifundo ngemvelo eqenjini abasebasha 2. Uhlelo isifinyezo izifundo
Kuyini napalm? Isicelo kanye nokwakheka napalm
Izigaba ezine yentuthuko intuthwane: ukuguqulwa okuphelele
Olga Freimut: biography, isithombe, impilo yomuntu siqu
Amafilimu mayelana rock bands: letingemaciniso kanye documentary. Isenzakalo esidume kunazo zonke rock band